Zvemagariro Kupa uye Kuda Rondedzero | Martech Zone
Zvemagariro Kupa uye Kuda Rondedzero
Chipiri, January 22, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Imwe yemaitiro ecommerce iri kusvika iko kugona kwekubatana kutenga zvipo. Kunyangwe tichizviita nerudo runomutsa, ikozvino unogona kuungana pamwe neshamwari uye kuunganidza mari yekutenga chipo chinodhura kushamwari. Iyo izano rakakura uye iro rinozotyaira yakakura kutenga online. Countmein chikumbiro chakadai.
Kubhadhara madhora makumi maviri nemana makumi mana nemana, ndiyo mari yepakati yezvipo zvepamusoro kubva 244 kusvika 2000. Mahoridhe, kupedza kudzidza, michato: zvese zvinowedzera. Zvakawanda sei zvaunobvunza? Kutsvaga iyi infographic, iwe uchaona kuti mutengo uri kuenderera kumatenga wedenga nemagetsi anopisa ndiyo inonyanya kutsvakwa zvipo zvinosanganisira smart mafoni, mapiritsi uye e-kuverenga, inokwana avhareji ingangoita madhora mazana masere muna 2011 pamari yegore. Uye, kana iwe uri mubereki ane vana vakawanda iwe uri kutarisana nehukuru hukuru. Iko kusvetuka kure kubva kuTeenage Mutant Ninja Turtles, WWF matanho manhamba uye pogs - ingova nekutarisa kwakatenderedza chero nzvimbo yekutengesera - vangani vane makore mashanu vaunogona kuona nePads neLeap Frog?
Heano infographic kubva kuCompmein paSocial Gifting uye Wish Lists:
Tags: countmeinmagariro zvipozvishuwo zvinyorwa
Pirate Metrics: Inogoneka Ongororo yeZvinyorwa